DEULA-NIENBURG AQOON YAHAN WAA GUUL! - Nidaamka Baradhada
в Frames, Isbeddellada / Isbeddellada
Maanta Ruushka qofku si macquul ah ayuu uga hadli karaa oo keliya ma aha maqnaanshaha khabiiro ku takhasusay wax soo saarka beeraha, laakiin sidoo kale shaqaale yari baadiye guud ahaan. Isla mar ahaantaana, horumarinta degdegga ah ee mashiinnada beeraha iyo teknoolojiyada waxay u baahan tahay xitaa shaqaale aan xirfad lahayn aqoon gaar ah iyo xirfado gaar ah.
Alexander Zharov, Madaxa Waaxda Horumarinta Mashruuca ee wadamada CIS ee DEULA-Nienburg GmbH
Waxbarashada beeraha ee Russia inta badan waa si gaar ah aragti ahaaneed ee dabiiciga ah, qalin badan ayaa in la baray shaqo wax ku ool ah ka xoq. Tababar la’aanta heer kasta ha noqotee waxay u horseedaa waqti badan iyo kharashyo dhaqaale.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan si macquul ah u qiimeyno xaaladda, dhibaatadani waa mid caalami ah. Dariiq looga baxo waxaa bixiya Xarunta Tababbarka Tababarka ee DEULA-Nienburg (Deutsche Lehranstalt fur Agrartechnik). Waxaa dib loo aasaasay 1926. Maanta DEULA-Nienburg waa hay'adda waxbarasho ee ugu weyn Jarmalka. Xaruntu waxay leedahay in ka badan 9 m2 xarumaha tababarka iyo wax soo saarka, waxay leedahay in ka badan 250 shirkado wadaag ah.
Adeegyada Xarunta waxaa adeegsada khubaro takhasus gaar ah leh iyo kooxo abaabulan oo loogu talagalay dib-u-tababarista iyo dib-u-tababarista. Maanta, soo saarayaasha beeraha waxay tixgeliyaan tababbarka horumarsan inay yihiin maalgashi wax ku ool ah oo ku saabsan horumarinta ganacsigooda waxayna si firfircoon uga qaybgalaan aqoon-isweydaarsiyo iyo koorsooyin kala duwan.
Muddada tababbarku waxay kuxirantahay heerka iyo baahida ardayga: shuruudaha way kala duwan yihiin maalin ilaa sannad. Qiyaasta kharashka tababarka - laga bilaabo 200 euro maalintii (tan waxaa ka mid ah tababarka, hoyga hoteellada Xarunta, cuntada iyo taageerada tarjumaan-haye) Dhamaadka koorsada, ardayda waxaa la siiyaa shahaado caalami ah.
Xarunta waxay tababartaa takhasus gaar ah meelaha soosocda: waxsoosaarka dalaga, xanaanada xoolaha, mashiinada beeraha, soosaarka bio-soosaarka, khudaarta siiba, saadka, maamulka.
All hal-abuurnimo farsamo duurka ku dhaca berrinkii aragti ee Xarunta. Hawsha ayaa ah in dadka lagu tababaro takhasusyada aadka loogu baahan yahay waqti gaaban iyo, ugu horreyntii, in lagu wareejiyo dhammaan xirfadaha wax ku oolka ah ee lagama maarmaanka u ah.
Barnaamijka caadiga ah waxaa looga dan leeyahay in lagu baro xirfadlayaasha sida ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo teknoolojiyada beeraha iyo sidoo kale dhowrista ilaha. Haddii loo baahdo, barnaamijyada koorsada shaqsiyeed ayaa si gaar ah loogu sameeyay arday kasta (ama kooxaha ardayda ah). Si loogu tababaro khabiiro ku takhasusay teknolojiyadda ugu casrisan, Xaruntu waxay heshiisyo la gashay shirkadaha wax soo saarka ee wareejinta mashiinada beeraha iyo qalabka si ku meel gaar ah loo isticmaalo.
Awoodda Xaruntu waxay kaloo suurtogal ka dhigeysaa in koorsooyin tababar oo heer sare ah loo qabto khubaro aqoon sare leh oo ka socda shirkadaha caalamiga ah ee hormoodka ka ah. Waa shaqaalahan sifiican u fahmi doona teknoolojiyada casriga ah una soo bandhigi doona tabo cusub wax soo saar ballaaran.
DEULA-Nienburg waxay ku martiqaadeysaa soo saarayaasha beeraha Ruushka inay tababar ku qaataan Jarmalka, laakiin, iyadoo la tixgelinayo xaaladda adduunka iyo rabitaanka macaamiisha, waxay diyaar u tahay inay abaabusho koorsooyin jihada beeraha kasta ee Ruushka, iyadoo lagu saleynayo shirkadaha lamaanaha ah.
Waan ku farxi doonnaa inaan kugu aragno dhacdooyinka waxbarasho ee DEULA-Nienburg!
Tags: 2020 .3xarkahaTababbarro tababbaridtababarka